Glass ကိုကျောက်မျက်ရတနာ, စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းဂိမ်းများ, Glass ကိုစကျင်ကျောက်, Glass ကိုပုတီး - Aobang
ပုတီး Glass ကို
အထူးပုံဖော် Glass ကို
စိတ်ဖိစီးမှု Ball ကိုခိုင်ခံ့စေ
Ice Cream စက္ကူဖလား
Tool များ & ဟဒ်ဝဲ
စိန် Blade ကိုစော
အရည်အသွေးမြင့်မားစျေးပေါအစိမ်းရောင်အရောင် 14mm, 16mm, 25mm ပါ g ...
အဆောက်အဦးအပြင်ဥယျာဉ်အားကစားပြိုင်ပွဲဘလီစ်ဘောလုံးများက de petanque ဘောလုံးကို
သတ္တုပြင်သစ်မြက်ခင်း Petanque ဘလီစ်ဘောလုံးများသတ်မှတ်မည်
အသေးစားဖန်ပုတီးပုံမှန်အရွယ်အစား 1-3mm, 2-4mm နှင့် 3-6mm ဖြစ်ကြသည်။ ငါ၏အစက်ရုံအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုရှိပါတယ်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်, ရေကူးကန်အတွက်အသုံးပြုရေကူးကန်အရောင်ကူးသဘောသဘာဝပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည်လုပ်နေကြသည်။
များသောအားဖြင့်အရုပ်အတွက်အသုံးပြုအဆိုပါပတ်ပတ်လည်ဖန်ဂေါ်လီလုံး, သူတို့ကသင့်ရဲ့ငယ်ဘဝသတိရစေနိုင်သည်ဒါပေမယ့်လည်းယခုအများအပြားကလေးတွေသူတို့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကိုအသုံးပြုဖို့ကလေးခြင်းဖြင့်ကစားဘို့အဦးနှောက်, ယခင်ဖန်ဂေါ်လီလုံးကိုတော့ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်မသာ။
2. အချင်း: 73mm
3. အလေးချိန်: 720g
4. အထူ: ~ 2.7mm 2.5
5. Surface ကကုသမှု: chrome plating
6. MOQ: 500 အစုံ
7. Delivery ဆိပ်ကမ်းကို: Tianjin, တရုတ်
8. Pack: နိုင်လွန်အိတ် စသည်တို့ကိုလူမီနီယမ်အမှု, သစ်သားသေတ္တာ, ပလပ်စတစ်သေတ္တာ
တစ်ခုတည်းနံရံနဲ့ရှေးခယျြခံရဖို့ကို double မြို့ရိုးကိုစက္ကူခွက်ကိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါစက္ကူခွက်ကို 100% အစားအစာတန်းဆင်စွယ်ဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူပစ္စည်း လုပ်. PE ရုပ်ရှင်နံရံနှင့်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ လူပျိုမြို့ရိုးကိုကော်ဖီစက္ကူခွက်ကို Poly-စီတန်းပေါက်ကြားခြင်းနှင့်စုပ်ယူမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မှကြံ့ခိုင်စက္ကူဆောက်လုပ်ရေးလုပ်နေကြသည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ပူကော်ဖီပူ milky လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်အခြားအချိုရည်ယူအသုံးပြုသည်။
Aobang IMP ။ & Exp.Co. Ltd မှ Shijiazhuang မြို့ Hebei ပြည်နယ်မှာတည်ရှိပါတယ် 2006 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ 10 နှစ်ပြီးနောက်, ငါတို့သည်ကိုယ်3စက်ရုံများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် Petanque / ဘလီစ်ဘောလုံးများ, Glass ကိုဂေါ်လီ, Glass ကိုကျောက်မျက်, Glass ကိုသဲ, ကျောက်စာ, ဟိုင်ဒရိုပုတီး, acrylic, သတ္တုအဆင်တန်ဆာ, etc တို့ပါဝင်သည်ခဲ့ကြကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အဓိကအားဖြင့်အားကစားအတွက်အသုံးပြုကြသည်, ငါးမွေးကန်, ကစားစရာ, အဆောက်အဦးများနှင့်အလှဆင်, ကောင်းစွာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော် 50 ကျော်နိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင်ရောင်းချခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်နောက်ဆုံးအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်, အဆုံးမှအစအဦးအနေဖြင့်တဦးတည်း-stop service ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်တဦးတည်း-on-one ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးစွမ်း customer`s လိုအပ်ချက်နှင့်အညီထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ, အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျနော်တို့အများဆုံးဖက်ရှင်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုရှိသည်။
Rm.1012, Zhongyuan အဆောက်အအုံ, No.368, Youyi မြောက်အမေရိက str ။ , Shijiazhuang, Hebei, တရုတ်
glass ကိုစကျင်ကျောက်, Clear ကို Glass ကိုစကျင်ကျောက် , Flat Glass ကိုစကျင်ကျောက် , Playaboule , သတ္တုဘူးလီစ်ဘောလုံးများသတ်မှတ်မည်, Playaboule အလင်း Bocce Ball ကိုသတ်မှတ်မည်,